Niaritra Izy Ireo ka Nafahana Ihany | Diary 2015
Malina tsara rehefa nitory
Lasa mpitory i Rafael Pared, tamin’ny 1957, tamin’izy 18 taona. Narahin’ny polisy niafina, hono, izy rehefa nitory. Nitady hirika hisamborana azy sy ireo niara-nitory taminy mantsy ireny polisy ireny. Hoy i Rafael: “Nitsoriaka nanaraka lalan-kely sy elanelan-trano izahay indraindray, ary nitsambikina tamin’ny fefin’olona mba tsy ho tratra.” Manompo ao amin’ny Betela izao i Rafael Pared sy Francia vadiny. Nanazava ny zavatra nataony sy ny mpitory hafa i Andrea Almánzar. Hoy izy: “Tsy maintsy nitandrina be izahay. Rehefa nitory tamin’ny trano anankiray izahay, dia nandingana trano folo vao nitory indray.”
Ela ny ela!
Efa ho 30 taona ny fitondran’i Trujillo tamin’ny 1959. Niova anefa ny toe-draharaha politika tamin’izay. Nisy antokon’olona avy any an-tsesitany tonga nanafika ny Repoblika Dominikanina, tamin’ny 14 Jona 1959, satria te hanongam-panjakana. Resy ry zareo, satria ny sasany maty moa ny sasany nogadraina. Nihamaro foana anefa ny mpanohitra an’i Trujillo, ary nihamafy koa ny tolona. Tsy hoe tsy azo resena mantsy, hono, io mpitondra jadona io.
Nanoratra ho an’ny fiangonana katolika rehetra ny Eglizy tamin’ny 25 Janoary 1960. Tsy ankasitrahany, hono, i Trujillo fa nanitsakitsaka ny zon’olombelona. Efa an-taonany maro anefa ny Eglizy no niray petsapetsa tamin’io mpitondra jadona io. Hoy i Bernardo Vega, mpahay tantara dominikanina: “Voatery nivadika ho mpanohitra an’i Trujillo ny Eglizy, taorian’ilay fanafihana tamin’ny Jona 1959. Nampiasa hery mantsy ny fanjakana tamin’iny, mba hampitsaharana ny fanafihana. Niharan’izany koa ireo antokon’olona avy teto an-toerana, izay nanohitra azy mangingina.”
Nahagaga fa nesorin’ny fanjakana ny fandrarana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny Mey 1960. Olona tsy nampoizina mihitsy no nanala an’ilay fandrarana, dia i Trujillo. Tsy nanohana azy intsony mantsy ny Eglizy Katolika. Ela ny ela ka nahazo fahafahana ihany ny Vavolombelona!